ကွန်ပြူတာမှာ Screenshotဖမ်းရန် Screenshot Studio 1.9.98.43 with Keygen | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
ကွန်ပြူတာမှာ Screenshotဖမ်းရန် Screenshot Studio 1.9.98.43 with Keygen
Posted on September 2, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ဒါလေးကတော့ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ Screen shoot ဖမ်းချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်
အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ အခြားသော ဆော့ဝဲတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်
ဒါလေးကတော့ ကျနော် သုံးရတာ အရမ်းကြိုလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်
သူ့မှာ ထူးခြားတာလေး ကတော့ Screen shoot ဖမ်းပြီးရင် မိမိသိမ်းချင်တဲ့ ဖိုင်နဲ့ သိမ်း ပြီးတော့
တခါတည်း Edit လုပ်လို့ရပါတယ် ဆော့ဝဲ လေး ကိုတော့ Keygen လေးနဲ့ Fullversion ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Keygen လေး ကို
Folder ထဲမှာ တခါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ
ZIPPYSHARE | SHAREBEAST | BOX
This entry was posted in Screen Shot Software. Bookmark the permalink.
← Firefox 24.0 BETA7ကို DOWNLOADCREW မှ ဒေါင်းနည်း	မိမိ ရဲ့ ဖိုင်တွေ Folder တွေကို Lock ချမယ် →